2012-03-21 18:53:04 GMT
Matt Mullenweg မတ်　မြူလန်ဗေ့ဂ်	 Details
2014-09-04 20:11:11 GMT
This is not justaplugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly seealyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page. ဒါက ပလပ်အင်သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဟလို ဒေါ်လီ အမည်ရ လူးဝစ် အမ်းစထရောင်း၏ အကျော်ကြားဆုံး သီဆိုခဲ့သော စကားလုံးနှစ်လုံးတွင် အနှစ်ချုပ်ထားသည့် မျိုးဆက်တစ်ခုလုံး၏ မျှော်လင့်ချက်နှင့် စိတ်အားထက်သတ်မှုတို့အား သင်္ကတြပေုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပလပ်အင်ကို အသက်သွင်းလိုက်သောအခါ စီမံခန့်ခွဲမှဒ စာမျက်နှာတိုင်း၏ ညာဘက်အပေါ်ဘက်တွင် <cite>ဟလို ဒေါ်လီ</cite> မှ စာသားတစ်ချို့ကို အဆင်သင့်သလို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။	 Details
ဒါက ပလပ်အင်သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဟလို ဒေါ်လီ အမည်ရ လူးဝစ် အမ်းစထရောင်း၏ အကျော်ကြားဆုံး သီဆိုခဲ့သော စကားလုံးနှစ်လုံးတွင် အနှစ်ချုပ်ထားသည့် မျိုးဆက်တစ်ခုလုံး၏ မျှော်လင့်ချက်နှင့် စိတ်အားထက်သတ်မှုတို့အား သင်္ကတြပေုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပလပ်အင်ကို အသက်သွင်းလိုက်သောအခါ စီမံခန့်ခွဲမှဒ စာမျက်နှာတိုင်း၏ ညာဘက်အပေါ်ဘက်တွင် <cite>ဟလို ဒေါ်လီ</cite> မှ စာသားတစ်ချို့ကို အဆင်သင့်သလို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
2013-12-15 10:33:11 GMT
Hello Dolly ဟလို　ဒေါ်လီ	 Details
Add Widget ဝစ်ဂျက်ထည့်ရန်	 Details
2014-09-04 20:11:05 GMT
To activateawidget drag it toasidebar or click on it. To deactivateawidget and delete its settings, drag it back. ဝစ်ဂျက်တစ်ခုအား အသုံးပြုရန် ဘေးဘားတစ်ခုသို့ ဆွဲချပါ သို့မဟုတ် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဝစ်ဂျက်တစ်ခုအား ပိတ်ထားပြီး ၎င်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များအား ဖျက်ရန်၊ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။	 Details
ဝစ်ဂျက်တစ်ခုအား အသုံးပြုရန် ဘေးဘားတစ်ခုသို့ ဆွဲချပါ သို့မဟုတ် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဝစ်ဂျက်တစ်ခုအား ပိတ်ထားပြီး ၎င်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များအား ဖျက်ရန်၊ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။